Global Voices teny Malagasy » Ireo Biloagera Miteny Frantsay Miresaka Ny Oscars Sy Ny Césars · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Septambra 2017 4:58 GMT 1	 · Mpanoratra Alice Backer Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Karaiba, Etazonia, Frantsa, Goadelopa, Martinika, Repoblikan'i Kongo, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Mozika, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Alain Mabanckou [Fr], kongoley mpanoratra no sady bilaogera monina ao Kalifornia ary efa nahazo loka maro tamin'ny literatiora, manoratra hoe  :
Raha dinihana lalina, diso i Frantsa tsy mandray io zavatra io amin'ny fomba matotra, satria nalaky be i Hollywood nandray ny maridrefin'ny filàna tsy mitsaha-mitombon'ny mpijery erantany hankany amin'io tanibe io. Frantsa kosa, manana olana goavana mila vahàna miaraka amin'i Afrika izay jereny ho toy ny vomanga masaka tokony harapaka. Tsy izany i Hollywood. Jereo fotsiny ny lanonana Césars natolotra ny Sabotsy 24 Febroary 2007 …: hasiahana, fanaovana bemarenina mikiakiaka amin'ireo tsaho erantany – mahatonga ny sarimihetsika iray toy ny “Indigènes” – natolotra tao amin'ny Césars tao Hollywood teo ambanin'ny lohateny hoe “Days of Glory”, sarimihetsika alzeriàna – tsy nahazo na inona na inona tany Frantsa (ooh, ndeha ataontsika hoe nahazo ny lokan'ny “fisehoana hafakely/ tsy manampaharoa”). Tsy maintsy fintinina ve hoe tao anatin'ireny loka pariziana ireny, tsy nisy na iray aza azo notanisaina ny zavabitan'ireo afrikàna miteny frantsay? Cissako avy any Maoritania ? Haroun avy any Tchad ? Ooh, manana ny Fespaco azy ireo ry zareo any Ouagadougou, hoy angamba ny sasany ! Tsy nisy nilàna azy ve, nandritra ny fanolorana ny Césars, ny fanomezana voninahitra ny sarimihetsika avy amin'izao tontolo izao – dia ny avy amin'ny tanibe afrikàna koa ? Kanefa dia izany no nataon-dry zareo Amerikàna tamin'ny Alahady 25 Febroary 2007, tamin'ny nanolorany ilay loka malaza Academy Awards (Oscars). Vahiny roa, (Catherine Deneuve eìsy Japoney iray izay tsy tsaroako ny anarany) no tonga nanome voninahitra ny sarimihetsika avy amin'izao tontolo izao, ary hita nifandimby tao ireo sary avy any Espaina, Alzeria, India ary Afrika Atsimo…. sy avy any Frantsa !!! Raha tsy hilaza, ho an'ny Afrika, an'i Djimon Hounsou, ilay tsy azo ihodivirana ary tompon'iny andro iny, nipetraka tery aloha tery, tsy lavitra an'i Di Caprio (ato ny sarin'izy roa)  ».
Mahaliana ny mamaky ny fomba fijery hafa mihitsy naroson'ny InternetRapide.com [Fr], tamin'ny fanehoany ny hafaliany noho ny nanokafan'ny mpitantana ny lanonana ny Césars tamin'ny fihiràna ilay zouk malazan'ny taona 80 avy any Goadelopa:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/13/107156/
 manoratra hoe: http://congopage.com/article4557.html
 (ato ny sarin'izy roa): http://www.congopage.com/IMG/jpg/amis.jpg